Musharrax Farmaajo “Aniga lix tiir idiinma wado balse saboolnimada iyo colaadaha ayaan la dagaallamayaa” | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Musharrax Farmaajo “Aniga lix tiir idiinma wado balse saboolnimada iyo colaadaha ayaan...
Musharrax Farmaajo “Aniga lix tiir idiinma wado balse saboolnimada iyo colaadaha ayaan la dagaallamayaa”
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah musharrax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa maanta kulan uu la yeeshay qeybaha kala duwan ee ururrada haweenka ka sheegay in waxyaabaha caqabadda ku ah hana qaadka nidaamka dowlanimo ay kamid yihiin wada shaqeyn la’aan ka dhex jirta madaxda qaranka, musuq maasuqa lagu hayo hantida dadweynaha iyo ku tumashada dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Mudane Farmaajo ayaa ku dhalliilay Madaxweynaha haatan xilka haya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu aad u dhiirrigeliyay in dastuurka la baal maro isaga oo ku eedeeyay inuu 6 bilood ah oo aan sharciga waafaqsaneyn uu xafiiska sii joogo.
Waxaa laga doonayay madaxweynaha ayuu yiri inuu dhawro dastuurka iyo shuruucda lagu heshiiyay.
Mudane Farmaajo ayaa yiri “Waxaad arkeysaan in Madaxweyna uu xafiiska ku fadhiyo harci darro muddo 6 bilood ah. Waxay ahayd in uu doorasho qabto bishii September ee sanadkii hore.
Waxyaabaha dib noo dhigay ayay kamid tahay inaan sharciga la ixtiraamin.”
Waxaa uu intaas ku daray hadalkiisa in haddii ay xildhibaannada qaranka kalsoonidaada siiyaan in uu wax ka qaban doono amniga iyo dhaqaalaha oo ah labada qodob ee ugu muhiimsan siyaasadda uu dalka ku hagi doono. “Anigu lix tiir idiinma hayo. Waxaan idiin wadaa inaan wax ka qabto labo arrimood oo ah inaan saboolnimada la dagaallamo iyo inaan colaadaha dalka ka jira joojiyo.”
Mar uu ka hadlayay sida uu wax uga qaban doono amniga haddii la doorto ayuu sheegay in ay ay Al Shabaab ka faa’iideysanayaan kalsooni darrada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan dowladda, isaga oo carrabka ku adkeeyay inuu isku xiri doono shacabka iyo dowladdooda.
“Haddii ay shacabka iyo dowladdu ay is raacaan oo ay isgarabsadaaan Al Shabaab labo arrimood ayaa hor yaalla in ay kala doortaan; haddii ay heshiis rabaan inaan soo dhaweyno oo aan tabobar iyo dhaqancelin u furno.
Haddii ay diidaan aniga ayaa hormuud ka noqonaya dagaalka lagu qaadayo oo tuutaha ciidanka xiranaya. Meel ay ku dhuuman karaan maleh oo maalin qura ma sii jiri karaan. Waxa ay noo laynayaan oo ay noo qarxinayaan wax kale ma aha. Waxaa sabab u ah shacab iyo dowladda oo aan wada shaqeynin.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku amaanay haweenka Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahaayeen halgankii leegada SYL isaga oo uga mahadceliyay taageerada ay la garab istaageen xukuumaddii uu Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa.
Ugu dambeyntii Mudane Farmaajo ayaa kula dardaarmay haweenka in ay kaalin mug leh ka qaataan ololaha uu ku doonayo inuu dalka ku hoggaamiyo.
“Haweenka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay xildhibaannada la hadlaan oo ay u sheegaan in ay codkooda meel fiican ku ridaan. Maxaa yeelay codkaas haddii mar meel xun lagu rido 4 sano lama soo celin karo.”
Previous articleDiiwaan galinta musharaxiinta Madaxwaynaha oo bilaabatay
Next articleXaqiiqa Times